भिडियोमा हेर्नुहोस्, करोड जितेका राजिवलाई सोधिएको गाह्रो प्रश्न , झण्डै गुमेको एक करोड ! (भिडियो) – Mix Khabar
भिडियोमा हेर्नुहोस्, करोड जितेका राजिवलाई सोधिएको गाह्रो प्रश्न , झण्डै गुमेको एक करोड ! (भिडियो)
पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमात्रै नेपालको बिकास हुने को बन्छ करोडपतीमा सहभागीता जनाएर १ करोड जितेका राजीव जैनले बताएका छन् । उनले नेपालको समृद्धिका लागि पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार र प्रर्वद्धन हुन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
राजीवले जितेको १ करोड मध्ये नेपालका पर्यटिक क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा लगाउने समेत बताएका छन् । ‘म नेपालका पर्यटकिय क्षेत्रको भ्रमण गर्नेछु ।’ को बन्छ करोडपतीमा सहभागीता जनाइरहेको बेलामा विश्व भ्रमणमा निस्कने बताउनु भएको थियो नी ? भन्ने प्रश्नमा उनले थप भने, ‘मेरो योजनामा मैले परिवर्तन गरेको छु ।’
कार्यक्रममा दमदार सहभागीता जनाएर जितेको धन रासी आफ्नो विभिन्न योजनामा लगाउने उनको सोच छ । नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनमा पनि सानो योगदान दिने बताउँदै उनले भने ‘अन्य समाजसेवाका काममा पनि म लगानी गर्नेछु ।’
नेपालमा यसै वर्ष सुरु भएको फ्रेन्चाइज शो ‘को बन्छ करोडपती’ मा राजीव जैन बिजेता बनेका हुन् । शोले गरेको घोषणामा पहिलो करोडपति विराटनगरका जैन बन्न सफल भए । जैन एमबीए डिग्री होल्डर हुनुका साथै उनी क्विज मास्टरको रुपमा समेत परिचित छन् । उनका साथीहरुका अनुसार उनी बुहप्रतिभाशाली छन् ।
Posted on: Wednesday, May 15, 2019 Time: 19:47:31